कर्पोरेट पहिचान, म्यागजिन, ल्यापटप र अधिकको लागि M 36 मकअपहरू क्रिएटिव अनलाइन
लुआ लौरो | | छविहरू
हाम्रो काम को रूपमा डिजाइनर यो फाईलमा हाम्रो विचारहरूको ग्राफिक प्रतिनिधित्व मात्र सीमित छैन जुन हामी पछि प्रेसमा पठाउनेछौं। हाम्रो काममा कुराकानीको थोरै प्रशिक्षित र धेरै आवश्यक सामाजिक कौशल पनि सामेल छ। मार्केटिंगबाट, बिक्रीबाट, बाट मनाउनु। हामीले आफ्ना विचारहरू कसरी बेच्ने भनेर जान्नुपर्दछ, कुराकानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी जान्दछौं कि हामी के गर्न जाँदैछौं महान हुनेछ। हाम्रो प्रस्ताव शानदार छ।
के तपाईं ग्राहकहरुमा प्रस्तुतीलाई बेवास्ता गर्ने मध्ये एक हुनुहुन्छ? सकेसम्म यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। अब यो पहिले भन्दा सजिलो छ सहि प्रस्तुत गर्नुहोस्, राम्रो र धेरै सरल पत्र। वा एक अमेरिकी खाम एक ग्राहकलाई अन्तिम छवि नतिजामा जति सक्दो नजिकको छवि प्रस्ताव गर्नुहोस्: जुन फोटोको जस्तो देखिन्छ (यो अहिले सम्म नभए पनि)। आफैलाई मद्दत गर्नुहोस् अद्भुत मकअपहरू जुन हामीले तपाईंको लागि संकलित गरेका छौं। अगाडि बढ्नुहोस् र यदि तपाईं अधिक चाहानुहुन्छ भने यस संग्रहलाई नहेर्नुहोस् मूल पुनःसुरु.
यस विविध संग्रह भित्र कर्पोरेट पहिचान मकअप
36 मकअपहरू समग्रमा सबै स्वादको लागि सबै भन्दा बढी प्रयोग भएको समर्थन आज हाम्रो दिन मा। हामी आशा गर्दछौं तपाईंले राम्रोसँग तिनीहरूको फाइदा लिनुभयो। याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने, तपाईं लेख साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ वा हामीलाई टिप्पणी दिनुहोस्।
आईफोन, आईप्याड, पत्र, खाम र कार्डका साथ कर्पोरेट पहिचान
पत्र, संक्षिप्त, आईप्याड, आईफोन, खाम (दुबै पक्ष), कार्डहरू (दुबै पक्ष), दुई कलम र नोटबुकको साथ कर्पोरेट परिचय
सेतो फ्रेमको साथ पोस्टर
डेस्कमा कालो आईफोन
आईफोन white सेतो फ्ल्याट शैली
पृथ्वी र कालो कर्पोरेट पहिचान
खैरो पृष्ठभूमिमा कर्पोरेट पहिचान
धेरै प्लगइनहरूको साथ पहिचान
आईफोन र आईप्याड कालो र सेतो
परिप्रेक्षमा गुगल नेक्सस
डेस्कटपमा कर्पोरेट पहिचान
बन्द र खुला पत्रिका
धेरै यथार्थपरक म्यागजिन
डेस्कटपमा यथार्थवादी iMac
सनग्लासको साथ कर्पोरेट पहिचान
लोगो काठमा कुँदिएको
मगको साथ कर्पोरेट पहिचान
हाथमा आईफोन ss
सेतो वा कालो कर्पोरेट पहिचान
कालो र सेतो आईप्याड
अनुप्रयोग डिजाइनको लागि मकअप
खैरो मा Triptych
हाइपर यथार्थवादी पत्र
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » छविहरू » Corporate 36 कर्पोरेट पहिचान मकअपहरू, ल्यापटपहरू, म्यागजिनहरू र अधिक
सर्जियो Fuentes भन्यो
तपाईको कामको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। यसलाई जारी राख्नुहोस्: D तपाईंको वेबसाइटले मलाई धेरै मद्दत गरेको छ, मैले यो नयाँ जोश ममा फेला पारेको छु।
मेक्सिकोबाट धेरैलाई अँगालो।
सर्जियो Fuentes लाई जवाफ दिनुहोस्